१०३ बर्षे इटालियनको ‘साहस, विश्वास’ ले भाइरसलाई हराउन सहयोग गर्यो – दैनिक नेपाल न्युज
रोमा- कोरोनाभाइरसबाट मुक्त हुन, उनीले जस्तै, आडा जानोसो साहस र विश्वासको सिफारिस गर्छिन्, समान गुणहरू जसले उनको लगभग १०३ वर्षमा उनको राम्रो सेवा गर्यो। इटाली र छिमेकी फ्रान्ससँग युरोपमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ जसलाई “सुपर ओल्ड” भनिएको छ – जुन कम्तिमा १०० हो। संसारको सबैभन्दा बढी संख्यामा कोवीड-१९ ले मृत्यु भएको इटालीले आफ्नो सुपर- प्रेरणा को लागी पुरानो बचे। “म राम्रो छु, म ठीक छु”, जान्सोले मंगलबार भनेको एसियाटेड प्रेससँग मारिया ग्राजिया रेसिडेन्सको एक भिडियो कलमा पिडमन्टको उत्तरी क्षेत्रको लेस्सोनामा बृद्ध वृद्धहरूका लागि भने। “म टिभी हेर्छु, अखबार पढ्छु।”
झानुसोले एक सुरक्षात्मक मुखौटा लगाइन्, जसरी उनको 35 बर्षको परिवारका डाक्टर कार्ला फर्नो मार्चेजले पनि लगाइन्, जसले आँखा लुगा र टाउको छोप्ने गाउन पनि दान गर्छिन्। उनको रोगको बारेमा सोध्दा, झानुसो भद्र हुनुहुन्छ: “मलाई ज्वरो आएको थियो।” उनको डाक्टरले जनासुसो एक हप्ताको लागि ओछ्यानमा थिए। “हामीले उनलाई हाईड्रेट गर्यौं किनकि उनी खाइरहेकी थिइनन्, र त्यसपछि हामीले सोच्यौं कि उनले यो बनाउने छैन किनभने उनी सँधै डराउँथिन् र प्रतिक्रिया गर्दिनन्,” फर्नो मार्चेसले भने।
“एक दिन उनले फेरि आँखा खोलिन् र उनले पहिले गरे जस्तै फेरि गर्न थालिन्,” फर्नो मार्चेसले भने। झानोसो उठ्न सक्षम भएपछि डाक्टरले बिर्सन सके, त्यसपछि ओछ्यानबाट बाहिर निस्किए। कुन कुराले उनलाई बिमारीबाट गुज्र्यो? “साहस र बल, विश्वास,” झानुसोले भनिन्। यसले उनीको लागि काम गर्‍यो, त्यसैले उनी बिरामी परेका अरूलाई “आफूलाई साहसी हुन, विश्वास गर्न” सल्लाह दिन्छिन्। COVID-19 ले हल्का वा मध्यम लक्षण पैदा गर्न सक्दछ, र संक्रमित धेरै जसो स्वस्थ हुन्छन्। तर वृद्धहरू र अवस्थित स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई बढी गम्भीर रोगको लागि बढी जोखिम हुन सक्छ।
इटालीको पाँच हप्ता लामो तालाबन्दी अन्तर्गत, जुन संक्रमणको प्रसारलाई समावेश गर्ने हो जसमा अस्पतालहरू ओइरिएका छन्, आगन्तुकहरूलाई वृद्धहरूको लागि घरमा अनुमति छैन। उनको डाक्टरले “उनीहरूले ढोका खोल्दा” उनी के गर्न चाहन्थे जानोसोलाई सोधिन्। “म सुन्दर हिंड्न चाहन्छु,” उनले जवाफ दिइन्। र तपाइँका तीन ठूला-नातिनातिनाहरू? “उनीहरूसँगै खेल्नुहोस्।”
इटालीमा मृत्यु, अस्पताल भर्ती र नयाँ संक्रमण बन्द हुँदैछ, र प्रिमियर ज्युसेप्पी कोन्टेले आगामी केही दिनमा तालाबन्दी कति समयसम्म रहनेछ भनेर घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र केही प्रतिबन्धहरू कम गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। अहिलेका लागि, झानुसो अन्य बासिन्दाहरूबाट टाढा छन् किनकि उनी भाइरसका लागि नकारात्मक छन् भनेर पुष्टि गर्न फलो-अप स्वाब टेस्टको लागि कुर्दै छिन्।
उनी उत्तरपूर्वी भेनेटो क्षेत्रमा ट्रेभिसोमा हुर्केकी छिन् जहाँ उनले टेक्सटाईल उद्योगमा धेरै वर्ष काम गरे। अगस्ट १ 16 मा १०4 वर्ष पुगेका झानुसोका चार बच्चाहरू थिए – जसमध्ये तीन बाँचिरहेका छन् – र grand नातिनातिना र तीन नातिनातिना छन्। “उनी बुढी, तर स्वस्थ, कुनै दीर्घकालीन रोगको साथ,” “उनका डाक्टरले भने। यस हप्ता, मिलान पत्रिका कोरीयर डेला सेराले पूरै पृष्ठ सुपर-पुरानो बचेकाहरूको कथामा समर्पित गर्‍यो, जसलाई “१०० बर्षको उमेरमा निको पार्ने” भनिन्छ। प्रेरणादायक चित्र इटालियन नर्सि ass होम र अन्य सहयोगी-बस्ने सुविधाहरूमा बस्ने वृद्ध व्यक्तिहरूको बीचमा ठूलो संख्यामा मृत्युको समाचारको प्रतिरोध हो।
पीडितहरू मध्ये, अधिकांश बुढापाकालाई कोभिडका परीक्षण गरिएको थिएन यदि उनीहरू नर्सिङ्होमहरूमा मरे, त्यसैले उनीहरूको संख्या इटालीको समग्र कोरोनाभाइरसको मृत्यु हुने संख्यामा पर्दैन, जुन विश्वमा सब भन्दा उच्च हो। मेडिकल स्टाफ “एक धेरै कठिन समय गुज्यो,” “डाक्टर Furno Marchese, भन्नुभयो। “यो धेरै आपतकालिन बिरामीहरूको साथ ठूलो आपतकालिन थियो, त्यसैले सकारात्मक परिणामहरू देख्नु एकदमै इनामदायी थियो, न केवल मेरो लागि, तर सबै मानिसहरुको लागि जसले यहाँ ननस्टप गरे।” गैर नाफामुखी, -१ ओछ्यानको मारिया ग्राजिया निवास बाहिर, इटालियन झण्डा भाइरसबाट मरेकाहरूको लागि श्रद्धाञ्जलि अर्ध स्टाफमा उडान गर्दछ। (एपी)